विवाहको हल्ला चलेकी नायिकासँग प्रभास लण्डनमा ! – " सुलभ खबर "
विवाहको हल्ला चलेकी नायिकासँग प्रभास लण्डनमा !
मुम्बई । चलचित्र ‘बाहुबली’ का अभिनेता प्रभास तथा अभिनेत्री अनुष्का सेट्टी लन्डन पुगेका छन् । हालै मात्र ‘बाहुबली’ लाई लन्डनस्थित रोयल अल्बर्ट हलमा ‘स्ट्यान्डिङ अवेसन’ नै मिलेको थियो । उक्त भव्य समारोहमा अभिनेता प्रभास, अभिनेत्री अनुष्काका साथमा दग्गुबत्ती राणाको समेत उपस्थिति रहेको थियो । यो समाचार आजको सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
निर्देशक एस एस राजामौलीको यो चलचित्र विश्वभर प्रदर्शनमा आएपछि अभिनेता प्रभास विश्वभर चिनिन सफल भए । यसले धेरै दर्शक तथा समीक्षकको मनसमेत जित्न सफल भएको थियो ।
लन्डनमा भएको उक्त समारोहपछि प्रभास र अनुष्काले सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै ‘बाहुबली’ छायांकनका बेलाका विविध प्रसंगको चर्चा गरे । साथै उनीहरूले आफूलाई मनपरेको क्षणका बारेमा बताए । अभिनेता प्रभासले ‘बाहुबली’ सँग आफ्ना धेरै सम्झनायोग्य क्षणहरू जोडिएको सुनाए । सोक्रममा उनले निर्देशक राजामौलीको समेत प्रशंसा गर्न भ्याए । उनले भने, ‘चार वर्ष लगाएर काम गरेको फिल्मलाई मनपराई दिएकोमा सबैलाई धन्यवादज्ञापन गर्दछु ।’
त्यस्तै, अभिनेत्री अनुष्काले पनि चलचित्रमा आफ्नासमेत धेरै सम्झनायोग्य क्षणहरू रहेको जनाइन् । उनले चलचित्रमा सम्पूर्ण टिमले मिहिनेत गरेको स्मरण गर्दै यो आफ्नो जीवनभर सम्झिरहने बताइन् । अनुष्काले आफ्नो हिरो आफ्नै बाबु भएको धनाइ राखिन् । ‘बाहुबली’ र यसको सिक्वेलको रुपमा बनेको ‘बाहुबली–२’ भारतको सबैभन्दा ठूलो बजेटमा निर्माण भएका चलचित्र हुन् । यी दुवै चलचित्रको निर्माण तथा निर्देशन राजामौलीले नै गरेका थिए ।
चलचित्रमा अभिनेता प्रभासले दोहोरो भूमिका प्रस्तुत भएका छन् । त्यसैगरी, अनुष्काले ‘बाहुबली’ मा प्रभासकी आमा र ‘बाहुबली–२’ मा उनकी श्रीमती देवसेनाको भूमिकामा प्रस्तुत भएकी छन् । यी दुवैको केमेस्ट्री मिलेका कारण धेरैले यो जोडीलाई धेरै मनपराइएको छ । कतिपयले उनीहरूका बीचमा ‘लभ अफेयर’ देखि विवाहसमेत हुन लागेको हल्लासमेत चलाएका थिए ।